राष्ट्रिय झण्डाको किनारामा कालो रङ्ग !
यो शैक्षिक शत्रमा वितरित विद्यालय तहको कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक हेर्दा विषयवस्तुमा गम्भीर त्रुटि र एकै किताबको मूल्यमा एकरुपता नभएको पाइएको छ । साथै, शैक्षिक शत्र एक महिना बित्नै लाग्दा पनि राजधानीकै सामुदायिक विद्यालयहरुले पूरा सेटमा पाठ्यपुस्तक पाइरहेका छैनन् । राजधानीकै बौद्ध नारायणटारस्थित चामुण्डा विद्यालयका विद्यार्थीले एक हप्ता अघिसम्म पूरा सेटमा पाठ्यपुस्तक पाएका थिएनन् ।
सबैभन्दा त्रुटि त कक्षा ९ का पाठ्यपुस्तकमा भेटिएका छन् । कक्षा ९ को नेपाली विषयको अग्र (कभर) पृष्ठमा नेपाली झण्डाको किनारालाई कालो रङ्गमा देखाइएको छ । यसबाट विद्यार्थी भ्रममा परेका छन् । नेपालको झण्डाको किनारा नीलो हुन्छ । पाठ्यपुस्तकको कभर बहुरङ्गी हुनुपर्ने निर्णय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै छ । तर, किताब विद्यार्थीको हातमा आइपुग्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको किनारा कालो भएर आउँछ । यसको सिआरसी (क्यामेरा रेडी कपी) तयार पार्ने निकाय पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै हो ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको यो पाठ्यपुस्तकमा कसरी झण्डाको किनारा कालो भयो भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेल भने यो गल्ति नै भएको स्वीकार्नुहुन्छ । ‘मैले केही दिन अघि थाहा पाएर यो के भएको हो भनेर जनक शिक्षाका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेको थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यद्यपि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै ले–आउट (साज–सज्जा) गर्दा पाठ्यपुस्तकमा यस्तो गरेको हो वा जनक शिक्षाबाटै छपाईमा त्रुटि भएको हो भन्ने सम्बन्धमा छानबीन हुने डा. पौडेलले बताउनुभयो । यता, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेश तिमल्सिना भने यसमा आफूहरुको गल्ति नभएको बताउनुहुन्छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै दुई रङ्गमा कभर आएको थियो,’ तिमल्सिनाले आजको शिक्षासित भन्नुभयो, ‘कक्षा ६–९ सम्मकै दुई कलरमा आयो । किताब छपाईको लगभग अन्तिमतिर करिव २५ प्रतिशत मात्र छाप्न बाँकी छँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चार रङ्गको कभर पठाइयो ।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. पौडेलले यो पटक पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा गइसकेकाले अब एउटा सूचना छिट्टै जारी गर्ने बताउनुभयो । विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी भ्रममा नपरुन् भनेर सूचना जारी गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, कक्षा ९ कै नेपाली विषयभित्रको ‘दुई मितको कथा’ पाठमा त्रुटि देखिएपछि जनक शिक्षाले भने सच्याइएको किताब पठाउने गरेको दाबी गरेको छ । यस्तो त्रुटि भएका पाठ्यपुस्तक बजारमा करिव १५ हजार गएकाले त्यो साट्न आफूहरुले डिलरलाई आग्रह गरेको प्रबन्ध सञ्चालक तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
मूल्य किन थरीथरी ?
कक्षा १–४ सम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको पाठ्यपुस्तकको मूल्य र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको निर्णयमा फरक देखिएको छ । बिक्रेताहरुले कतै किताबमै भएको मूल्यमा बेचेको भेटिएको छ भने कहीँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्णय गरेबमोजिम बिक्रि गरिएको पाइएको छ । जस्तै, कक्षा १ को मेरो नेपाली विषयको प्रतिपेज ५० पैसाका दरले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ५५ रुपैयाँ तोकेको थियो भने किताबमा ५६ रुपैयाँ मूल्य राखिएको छ । कक्षा १–४ सम्म समग्र मूल्यमा ६ रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ । कक्षा १ मा नेपालीमा १, गणितमा १, सामाजिकमा १, विज्ञानमा १ रुपैयाँ मूल्य फरक पाइएको छ । त्यस्तै, कक्षा २ को विज्ञानमा १ रुपैयाँ फरक देखिन्छ । यति रकम फरकले पनि लाखौं रुपैयाँ अभिभावकले बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा १–४ मा करिव ३३ लाख रुपैयाँ फरक परेको व्यवसायीहरुले बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुरानै मूल्यमा बेच्न सूचना जारी गर्ने अनि जनक शिक्षाले नयाँ मूल्य किताबमा राख्नुले बिक्रेता र क्रेता दुबै पक्ष भ्रममा परेका देखिन्छन् ।
१¬–४ सम्मको किताब मूल्यमा विवाद भएकैले पनि यस्तो फरक हुन गएको जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक तिमल्सिनाको भनाइ छ । ‘हामीले मूल्य बढाउनुपर्यो भन्ने माग राखेका थियौं । पाठ्यक्रमले मूल्य तोकेपछि किताब छापिँदा पृष्ठ बढी देखियो र त्यसमा एक–दुई रुपैयाँ बढी राखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । पाठ्यपुस्तकमा रहेको पृष्ठभन्दा एक पाना पनि बढी मूल्य आफूहरुले नराखेको तिमल्सिनाको दाबी छ ।
कक्षा ९ को अंग्रेजीमा छैन मूल्य
कक्षा ९ को अनिवार्य अंग्रेजी किताबमा मूल्य नै राखिएको छैन । बिक्रेताहरुले भने ८० रुपैयाँमा सो पुस्तक बेचेका छन् । यसरी मूल्य नै नराख्नुपर्नाको कारण भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा दुबैले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । किताबको त्रुटि र मूल्यको फरकपनका विषयमा निजीक्षेत्र भने अलमलिनुपरेको प्रतिनिधि दीपक भण्डारी बताउनुहुन्छ । ‘एउटै पाठ्यपुस्तक विभिन्न थरी मूल्यमा बेचिरहेका अवस्थामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समन्वय गर्नु पर्दैनथ्यो त ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट
प्रकाशित ३१ बैशाख २0७६ , मङ्गलबार | 2019-05-14 10:58:38
पशुपति मित्र माध्यमिक माविका सहायक
काठमाडौं । पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक भरत विक्रम वि.सी. र लेखापाल बद्रीप्रसाद पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग
तीन विश्वविद्यालयमा कामु उपकूलपति,सर्च
काठमाडौं । उपकूलपति छनोट कमिटीले नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत चार ओटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व कायममूकायम
पन्ध्रौं वाइ वाइ नेशनल एजुकेशन
काठमाडौं । शिक्षालय मासिक पत्रिकाले प्रदान गर्दै आएको नेशनल एजुकेशन अवार्ड विभिन्न संघ÷संस्था एवम् व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको छ ।
परम्परागत सिकाइ शैली फेर्दै डियरवाक
पारु तिवारी/काठमाडौं । पठनपाठनको परम्परागत शैली । शिक्षक पाठ पढ्ने । विद्यार्थी सुन्ने । अनि विद्यार्थीले भ्याइनभ्याई शिक्षकले भनेका
पशुपति मित्र माविलाई ‘शैक्षिक हव’
काठमाडौं । पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना भएका नव आगन्तुक विद्यार्थीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम फरक शैलीमा सञ्चालन
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित,३ हजार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार साँझ सार्वजनिक नतिजमा ३ हजार